Archive du 20170921
Julien Andriamorasata “Fanampiana ny TAXI no ataon’ny kaominina”
Tsy misy olona tsy tia fandrosoana sy fanatsarana ny fiainana izany fa mety tsy azon’ny mpitondra taxi tsara angamba ilay zavatra atao.
Fiharian’ny mponina Atsimondrano Somparan’ny fitondrana HVM
Nitaraina fatratra omaly ny depiote voafidy tao Atsimondrano, Voahangy Raharimanarivo, manoloana ny tsy mety fahavitan’ny fanarenana ireo
Taratasin’i Jean Milalao afo
Miarahaba anao aho ry Jean ! Fa inona mihitsy no tena mahazo anao ity e ?
Mpiasa handeha hisotro ronono Ezahana hahatsangana trano
Nampahafantarina tetsy amin’ny sampandraharaha misahana ny fitantanana ny taozavatra etsy 67ha omaly alarobia 20 sertambra
Salon de la Gastronomie Hisy fampianarana maimaimpoana momba ny fahandroan-tsakafo
Hotanterahina manomboka ny zoma 22 septambra ho avy izao, haharitra telo andro, etsy amin’ny AFT Andavamamba ilay « Salon de la gastronomie » andiany fahefatra natao hanomezan-danja ny vokatra vita Malagasy.
Tetikasa Marokanina eto Madagasikara Nofohazina herintaona aty aoriana
Nosantarina tamin’ny fivoriamben’ireo minisitra avy amin’ny firenena frankofona andiany faha-34 ny fivoriamben’ny Firenena Mikambana andiany faha-72 ao New York.
Mananika ny avo
Be ireo saika voafitaka omaly nahita ny vaovao niparitaka tamin’ny tambajotram-pifandraisana iray nilaza fa nisy lehiben’ny antokon’ny fitondram-panjakana niharan’ny fitsaram-bahoaka tao Andilamena omaly.
OMAVET Ampasampito Hampiasa fitaovana raitra sy moderna
Nisy ny fitsidihana teny ifotony fijerena ny toeran’ny OMAVET tetsy Ampasampito omaly izay nataon’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny kaominin’Antananarivo Renivohitra nahitana ny lefitra faharoan’ny
Benjamina Ramarcel Ramanantsoa « Mahavita azy isika »
Tsy misy mipetrapetraka eto fa miasa isika ary tsy maintsy mahavita azy. Io no nambaran’Andriamatoa Benjamina Ramarcel Ramanantsoa,
Ampasina Andina Ambositra Marary nify ny ankamaroan’ny mponina
Ratsy nify ny 80 %-n’ny Malagasy. Antony maro no mahatonga izany toy ny tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahaizana mikojakoja ny fahasalaman’ny nify sy ny ativava.
Fanasaziana zandary manao ny tsy mety Tsy mifidy galona, hoy ny SEG
Namoaka ny antontan’isa mikasika ireo vokatra azon’ny avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena nanomboka ny janoary teo ka hatramin’ny omaly alaronia 20 septambra ny fiadidiana ity sampan-draharaham-pitandroana ny filaminana ity.